पैसा कसरी कमाउने ? जुकरबर्ग र बिल गेट्सका ‘टिप्स’ - Birgunj Sanjalपैसा कसरी कमाउने ? जुकरबर्ग र बिल गेट्सका ‘टिप्स’ - Birgunj Sanjal
२४ मंसिर २०७६, मंगलवार ०५:२९
पैसा कमाउन तपाईं हामी कसलाई मन छैन र ? अझ टन्न पैसा कमाएर ऐशआरामको जीन्दगी जीउने कल्पना हर कोहीले हर समय गरि नै रहेको हुन्छ । तपाईं पनि गर्नु हुन्छ नै । तर कसरी पैसा कमाउने भन्नेमा तपाईं रुमल्ली रहनु भएको छ भने संसारकै सबैभन्दा धनाड्यहरु बिल गेट्स र फेसबुकका सस्थापक मार्क जुकरबर्गले दिएको यो सामान्य टिप्स काम लाग्न सक्छ ।
बिजनेस इनसाइडरका अनुसार बिल गेट्स भन्छन्- मान्छे समझदार हुने भन्ने कुनै एक तरिका हुँदैन । अलग–अलग प्रतिभा भएकाहरुलाई एकै ठाउँमा राख्न सके मात्रै पनि तपाईँ सफल बन्न सक्नु हुन्छ ।
फेसबुकका सस्थापक मार्क जुकरबर्ग भन्छन्- पहिला तपाईं आफैले आफैमाथि भरोसा गर्नुस् । जति तपाईं सोच्नुहुन्छ त्यो भन्दा कयौँ गुणा गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ । म जे पनि गर्न सक्छु, जे पनि सिक्न सक्छु भन्ने भरोसा राख्न भने नभुल्नुस । जुकरबर्ग सम्झन्छन्- मैले फेसबुक शुरु गर्दा म जम्मा १९ बर्षको मात्रै थिएँ ।
उनले भनेका छन्- तपाईं उच्च शिक्षा सकेर कलेजबाट बाहिरीने बित्तिकै ६० हजार डलर मासिक कमाउन सक्नु हुन्न, सिधै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्नुहुन्न ।
जानकी अस्पतालमा मेडिकल डाईरेक्टरको कार्यकक्षमा तालाबन्दी
ठगी मुद्दामा नेकपा प्रदेश सदस्य बैठा प्रहरी नियन्त्रणमा
४० वर्षीया महिलामाथि अहेबले गरे बलात्कार, न्याय माग्न जिल्ला धाउँदै श्रीमान्
रौतहटमा आगलागीबाट करिब ८ लाखको क्षति
रङ्गपुर सब–डिभिजन वन कार्यालय ६थान गोलाई बरामद
लागूऔषधसहित तीन युवक पक्राउ
पाेल्नलाई ठिक्क पारिएका इँटा नष्ट, १७ करोडकाे नाेक्सानी
चक्कु प्रहार गरी युवकको हत्या गर्ने ३ जना पक्राउ
ठाकुरराम किन बदनाम हुदै छ ? के कमजोर व्यवस्थापनका कारण छ यसको ? विद्यार्थी नेता वर्णवाल के भन्छन् ?
एम सि सि बारे नेपाली मजदुर एकता केन्द्र मलेसियाले आफ्नो धारणा एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको छ
आज को राशिफल – ०६ माघ २०७६ सोमवार